Raw Estradiol Cypionate ntụ ntụ (313-06-4) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Estradiol ntụ ntụ Usoro / Estradiol Cypionate ntụ ntụ
SKU: 313-06-4. Categories: Estradiol ntụ ntụ Usoro, Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike sitere na nchịkọta nke Estradiol Cypionate ntụ ntụ (313-06-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Nri a bụ hormone nwanyi (estrogen). Ụmụ nwanyị na-eji ya aka iji belata mgbaàmà nke mụọ ndị ikom (dika ọkụ ọkụ, ikpo ọkụ). Mgbaàmà ndị a na-akpata site na ahụ nke na-eme ka estrogen dị ala karịa.
Estradiol Cypionate ntụ ntụ video
Raw Estradiol Cypionate ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Estradiol Cypionate
Molekụla Formula: C26H36O3
Ọbara arọ: 396.56
Raw Estradiol Cypionate ntụ ntụ eji
Estradiol Cypionate dịkwa ka EC, E2C, Depo-Estradiol, Depofemin, Estradep, wdg.
Raw Estradiol Cypionate ntụ ntụ Usage
A na-erekwa ahịa nke usoro ọgwụgwọ 1 mg / ml na 3 mg / ml na mbụ.
Ịdọ aka ná ntị na Raw Estradiol Cypionate ntụ ntụ
Nyocha nke Women's Health Initiative (WHI) kwuru gbasara ọnyá dị ukwuu nke infarction myocardial, ọrịa strok, ọrịa cancer na-eme ihe ike, na ngwongwo na-agba ume, na nkwonkwo ukwu nke ụmụ nwanyị postmenopausal (50 ruo 79 afọ).
Onye na-elekọta ahụike na - edozi ma na - echekwa cypionate elradio. Ọ bụrụ na ị na-eji cycionate estradiol n'ụlọ, na-echekwa cycionate estradiol dị ka onye na-enye gị ọgwụ na-elekọta ma ọ bụ onye na-elekọta ahụike nyere gị ntụziaka. Debe cypionate nke estradiol site n'ikike nke ụmụaka ma pụọ ​​na anu ulo.
Raw Estradiol Cypionate ntụ ntụ Marketing
IV. Esi zụta Estradiol Cypionate ntụ ntụ si AASraw?
AASraw na-enye 98% Estradiol Cypionate raw ntụ ntụ nye ụmụ nwanyị niile na-ewere estrogens maka ịme ihe.
Estradiol Cypionate Raw Powder Recipes
1 nyochaa maka Estradiol Cypionate ntụ ntụ
Estradiol Cypionate ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi